Raha ny fanambaran’ireo tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny mpitandro filaminana anefa dia mbola manan-kery hatrany ny lalàna mandrara ny fiakanjoan’ny olon-tsotra ireny.. Samy ahitana ireny avokoa na ny eny amin’ny lamba vao, tahaka ny zaitra an-tsena, indrindra amin’ireo mpivarotra lamba tonta. Maro amin’ireo mpivarotra no manararaotra ny faran’ny herinandro sy ny ora tsy fiasan’ireo manampahefana, indrindra ara-miaramila sy polisy mba
handafosana ireny. Mpivarotra iray no nanambara fa tsy atao ankarihary fa somary miamboho arabe na takonan’ny fitafiana namany ny fomba ivarotana azy ireny. Hatreto aloha raha ny filazany, tsy voasambotra izy raha nivarotra izany fa tonga dia lasan’ny mpitandro filaminana ireny fitafiana ireny. Nilaza izy fa tsy afaka ny hanenjika ireto farany fa tsapany fa tsy manara-dalàna izy mivarotra ireny kanefa lafo masonkarena izy ireny, noho izy be mpanjifa, indrindra any amin’ny faritra. Ireo jiolahy manao fanamia-miaramila no loza mandondona an’ny fiarahamonina amin’ity fitosahan’ny akanjona mpitandro filaminana anaovana sivily ity.